Mhete Dzakabatikana VaDaisy maruva akaumbwa nemaruva maviri akasanganiswa kuita rimwe, chikamu chemukati uye chekunze petal chikamu. Iyo inomiririra kupatsanurana kwemaviri anomiririra rudo rwechokwadi kana chisungo chekupedzisira. Iyo dhizaini inosangana muhumwe hweruva re daisy inobvumira uyo akapfeka kupfeka Blue Daisy munzira dzakawanda. Kusarudzwa kwemasafire ebhuruu mapati kusimbisa kufemerwa kwetariro, chishuvo uye rudo. Masapira ejecha akasarudzirwa ruva repakati maruva anofukidza uyo anopfeka kuti anzwe kufara uye kudada nekupa iye akapfeka kudzikama uye chivimbo pakuratidza kunaka kwayo.
Pendant Mubatanidzwa wekusingaperi naOlga Yatskaer, nyanzvi yezvakaitika kare yakasarudza kuita basa idzva rekugadzira zvishongo, inotaridzika iri nyore asi izere nerevo. Vamwe vaizoona mariri kubata kweCeltic zvishongo kana kunyange banga raHerakles. Icho chidimbu chinomiririra chimwe chisinga peri chimiro, chinoita senge miviri yakabatana. Mhedzisiro iyi inogadzirwa kuburikidza nemahara egirazi-kunge mitsara yakanyorwa pamusoro pechinhu. Mune mamwe mazwi - vaviri vakasungwa pamwechete seimwe, uye imwe mubatanidzwa weaviri.
Jewelry Jewelry Kubatanidza nefashoni uye hwepamberi tekinoroji, chirongwa ichi ndechekugadzira zvigadzirwa zvezvishongo izvo zvinogona kuita kuti zvinyakare zveGothic zvive chimiro chitsva, vachikurukura nezvezvingaitika zvechinyakare mune zvazvino. Nekufarira iyo nzira iyo Gothic inodedera inofuridzira vateereri, chirongwa ichi chinoedza kumutsa yakasarudzika ruzivo rwemunhu kuburikidza nekutamba kwakabatana, kuongorora hukama pakati pegadziridzo nevapfeka. Synt syntones matombo, seyakadzika eco-imprint zvinhu, akachekwa zvisina kujairika kumeso kumeso kukanda mavara avo paganda kusimudzira kudyidzana.
Chitatu 29 Zvita 2021
Colorter Chida chaEvha chakagadzirwa ne750 carat rose negoridhe jena. Iyo ine 110 madhaimani (20.2ct) uye ine zvikamu makumi matanhatu neshanu. Ose ane maviri akasiyana akasiyana akataridzika: Kumucheto maonero masekete akaumbwa apuro, mumusoro kumusoro V-yakavezwa mitsara mitsara inogona kuonwa. Chikamu chega chega chakapatsanurwa parutivi kuti chigadzire matanho ekutakura mangoda acho - madhaimondi anoitwa nekusawirirana chete. Izvi zvakanaka zvinosimbisa kupenya, huchenjeri uye hukuru hwakajeka hwakajeka wedhaimani. Iyo inobvumira kuve yakanyanyisa kujeka uye yakajeka dhizaini, kunyangwe saizi yemutsipa.
Chipiri 28 Zvita 2021
Firo Moto Wekubheka Set China 20 Ndira
Phenotype 002 Bangili Chitatu 19 Ndira
Mangata Patisserie Bakery Visual Visual Chipiri 18 Ndira
Kuputira Maziso Eziso Mhete Dzakabatikana Pendant Jewelry Jewelry Colorter Rin'i